Qajeelfamni daldala aannan da’iimaniifii nyaatawwan dabalataa too’atu hojiirra oleera – ዜና ከምንጩ
Qajeelfamni daldala aannan da’iimaniifii nyaatawwan dabalataa too’atu hojiirra oleera
Abbaa taayitaa qorichaafi nyaata Itiyoophiyaa Qajeelfama daldala aannan da’iimaniifii nyaata dai’iimanni dabalataa too’atu fiisirnaqabsiisu torbee darbee irraa jalqabee hojii irra ooluu jalqabuu isaa beeksiseera.
Qajeelfamni moggaasa maqaa to’annaa nyaata dai’iimanni jedhamuu kennameefkun rakkoo fayyaa nyaata dai’iimanni karaa seeraan alaa taasifamuun dhufuu danda’u hir’isuuf akkasumas harma haadhaa hoosisuu jajjabeessuufi yaadamee kan qophaa’ee jedhameera.
Qajeelfamni homishaan kam iyuyookaanqaamni fichisiisuu kamiyyuu itu homisha isaa gabaa keessa hin galchiin waajjira ministeerichaf adeemsa gaarii akkaataa homisha isaafi biyya homishametti bilisaan kan gurguramu ta’u isaanii kan ibsu akkasumas waraqaa ragaa qulqullinadhiyeessuu akka qabu kaa’eera.
DabalataanisQajeelfamni kun harma haadhaa hoosisuu kan adda duraanii fayyaa da’iimaniifiifaayidaa guddaa kan qabu ta’u isaanii barreeffama ibsuu gorsa faayidaa qabu Sam’s homishichaa irrattibarreesseekaa’uu dirqama taasiisee ka’a.
Qajeelfamichiiol’aantummaadhaanbeeksisa akaakuu kamiyyuu nyaata dai’iimannifiihomisha nyaataa irrattikallattiifi alkallattiin beeksisuun beeksisahojjachuuniifii hojii isponsaraa raawwachuun dhorkaa ta’u isaa ka’a.
Qajeelfama kanaan raadiyoo dhaan TV dhaaninterneetiidhaanyookaankaraamakamiyyuu daldala nyaata dai’iimanni irratti bobba’ee akkaataa qophii nyaataa Sana kan mul’isuufakkiidhaanyookaan sagaleedhaan filmiidhaanbu’awwanbarreeffameen wayee nyaata daa’immanii agarsiisuudhaan ergaa dabarsuudhaan iddoogurgurtaattiyookaaniddoo hojiitti iddoo tajaajila ummatattiagarsiisuun gatii gurgurtaa nyaata daa’immanii irrational hirifnni akka jiru beeksisuun akkasumas nyaata daa’immanii irra hirifnni gatii jiraachuubeeksisuu akkasumas nyaata daa’immaniitolaan kennu fi kanneen biroos dabalee daldalaan akka beeksiisaatti kan fayyadamuu niidhorka.
Dabalataanisqajeelfamni kun omishaafifichisiisaan aannan daa’immanii kam iyu yookaan balls bu’aan aannan dai’iimanni big garagaarsaan mama kamiyyuu kennu hindanda’u jedhee Kansas kaa’e ta’uus alkaline barbaachifttummaa isaatti ilaalamee Abbaa taayitiichaa irraa heyyama too argate dai’iimanni miidhaa qabaatee Kennu ni heyyama Halli kennaa kana ifa taasisuu qajeelfamiichi ni dhorka.
Kaayyoonqajeelfamiichi Otto qophaa’ee fayyaa da’iimaniifii human dhibee ittisuu guddisuufi beeksisawwan harma haadhaa Kansas bakka bu’aan fakkeessuu dhaanbeeksisawwanhojjetamandhaabsiisuu yaadamee akka ta’e ragaan Addis Maaladaan abbaa taayitiichaa irraa argateeni agarsiisa.
QiddusSaamu’eel hojii dirree mariisiisuuf qorannaa daldala jilmaatiin waggaa saddetiolkan turan ogeessa kutaa gurgurtaa kan turan yammuu ta’u qajeelfamiichi madaalawaa akka hintaanee akka isaanittidhaga’amu Addis Maaladaatti ibsaniiru.
“Beeksisa dhorkuun aadaa ta’a baramaa waan deeme fakkaata”kan jedhan Qiddus nyaata da’iimaniifii aannaniif of eeggannoon taasifamuu kan qabu ta’us kaayyoon beeksisaa guddaan hawaasicha beekumsa qabsiisuu ta’us qajeelfamiichi qabxxiwwan dirqisiisaa garaagaraa kaa’uu isaa eeraniiru.
Fakkeenyaafqabiyyeen qabu abbaa taayitiichaan yoo mirkanaa’eebal’inaan kaa’uun miidhaan cimaadhaan yoo qabaateebiffumawalfakkaatuun kaa’uun akka danda’amu eeraniiru.Qajeelfamnikunsababbiwwan garaa garaa mirga hawwan harma hoosisuu hin dandeenyee kan dhorku ta’e natti mul’ateera jechuudhaan Qiddus Addis Maaladaatti himaniiru.
NistuhiwarqAffas ogeetti fayyaa hawaasaafi waggaa kudhaniiol fayyaa hawaasaa irratti kessumaa eegumsa fayyaa hawwaniifdaa’immaniiiratti kan hojjetan yammu ta’u “calqabbiigaariidha garu beeksisawwan dhorkuun ala wantootiidursikennamuufii qabu turaniiru fakkeenyaaf homishoota kontiroobaandii tiin gabaa keessa galan qulqulleessuun dhimma dursikennamuuf ture”jedhaniiru.
Xiyyeeffannaan aannan harma haadhaaf kenname gaariidhakan jedhan Nitsuwarq amma waggaa afuriifi walakkaatti daa’imman harma hoosisuu ni gorfamaa jedhaniiru. Itti dabalaniis Qajeelfamnikunbeeksisayammudhorku bakka isaa beeksisawwan harma hoosisuu jajjabeessan akka hojjetamanministeerri fayyaa bal’inaanhojjechuu qaba jechuudhaan ibsaniiru.
Total views : 6982512